कथा-प्रेमिकाको सफलताले भोगाएकोे पीडा बिर्सन कठिन! - Samudrapari.com
१२५० पटक हेरिएको
न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चाऽपि न बिश्वसेत् ।
कदाचित्कुपितं मित्रं सर्व गुह्यं प्रकाशयेत् ।।
अर्थात खराव मित्रलाई सधै विश्वास गर्नु हुन्न । कुनै बखत रिसाएको साथीले आफ्ना गोप्य कुराहरु उजागरमा ल्याइदिन सक्छ् । चाडक्यको यो भनाई !
मलाई खराब सम्झौं या असल तर तिम्रो केहि कुरा उठाउन मन लाग्यो । मलाई पनि माफ गर न चाहेर पनि तिम्रो अनुमती बिनानै तिम्रा केहि कुरा लेख्न सुरु गर्दै छु । तिमिले बिश्वासका साथ मलाई सबै कुरा भन्ने गथ्यौ । त्यहि कुरामा बिश्वास धात गर्दैछु र लेख्दै छु ।
सुनिन्छ प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेम गर्ने जोडिहरु भोली कहिल्यै सोच्दैनन् । यहि प्रेममा अन्धोभक्त भएर लाग्नेमध्यको जोडि पनि एक देखे । कलम, अनि कबिताको । यो जोडिको नाम आहा सुन्दै लाग्छ यि दुबै एक अर्काका परिपुरक हुन् । जसरी कलम बिना कबिता कोर्न सकिदैन् त्यसरी कबिता लेख्न नसक्ने कलम पनि बेअर्थी । यसरी नाम जुडेका प्रेम जोडिहरु कमै देखेको र कमै सुनेको छु ।
कलम जसरी तिखारिदै जान्छ् । त्यसरीनै हरेक शब्द शब्द जोडिएर कबिता बन्न सक्छ् । र समाजमा साहित्यको पैदा हुन्छ । त्यहि कलमले लेखेको कबिताले सके विश्वको इतिहास समेट्ला नभए आफ्नो देशमा एउटा गरिमा कोर्नेछ । यहि जोडिको अर्को काम पनि हो । समाजमा दिक्षा, दिनु । मलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो कुनै दिनको तिमीहरुको अथाह माया र प्रेम देखेर । कति चोखो नि स्वास्र्थ प्रेम है तिमिहरुको ? भनिन्छ नि ?
मान्छे स्वार्थी प्राणी हो । उसमा हरेक स्वार्थहरु हुन्छन् । मौका पर्दा आखामा कालो पर्दा झुण्डायर भाग्न खोज्छन् । हो यो जोडिको त्यो समन्ध टुटेको सुन्दा मन खिन्न र दुखिछु । धेरै भैसकेको रहेछ यिनिहरु छुटेको । मलाई मात्रै हिजो थाहा भयो । कबिताले मलाई सधै दाई भन्थि । र उसले कलमका बारेमा मंग सधै कुरा गर्न रुचाउथि र सबै कुरा मलाई सेयर पनि गर्थी । तर उसंग पनि कुरा नभएको पनि धेरै भैसक्या रहेछ । र कमलसंग पनि कुरै भएको थिएन । मेरो कामको व्यस्तता । र समय परिस्थिती पनि । एका एक धेरै समय पछि तिमिले मलाई सम्झियौ कलम ।
फोन गर्दै भन्यो कबितासंग कुरा हुन्छ ? दिनेश । मैले भने यार धेरै भयो कुरा गरेकि छैन् । किन नेपाल आकी छ र ? मैले जवाफसंगै प्रश्न तेस्र्याए । खै मेरो कुरा नभएको पनि धेरै भयो यार मलाई नि थाहा छैन् ? मैले भने किन के भयो र तेरो कुरा हुदैन र ? अनि का गाको थिस आज सम्म ? छोड् यार अब यसको नाम लिन बन्द गर । उ अस्ट्रेलिया गएको पनि बर्ष पुगि सक्यो । गएको केहि समय सम्म त मेरो पनि कुरा हुन्थ्यो ।
तर समय लामै भयो कुरा नभएको । फोन नम्बर आफुलाई थाहा छैन् । कुरा भए उहि फेसबुकमै हो । भएको छैन् मेरो पनि । मैंले यत्ति भने । उ रिसाउदै भन्यो बन्द गर यो कुरा भनेको सुनिनस ? नजिकै ल्यापटप थियो । मैले उसलाई सर्च गरे तर छैन । यसको मतलब उसले पनि मलाई ब्लक लिष्टमा राखेकि रहेछ । मैले भने मलाई ब्लक छ यार । उ झन रिसायो र फोन काट्यो । मैले पनि फोन गरिन उसलाई । एक छिन् म पनि चुप भए । र पुराना पुराना म्यासेज पल्टाए ।
कबिताले कलम भारतबाट आएका बेला आफु दुर्घटनामा परेको र कलमलाई खबर गर्दिनुहोला भनेको अन्तिम कुराकानी रहेछ । एक छिन सोचे आखिर किन रहेछ । हिजो कबिताले कलमकै मायाले मलाई मात्रै होइन, उसका सबै साथी, दिदि बहिनी, सबैसंग धेरै नजिकहुने उ आज किन यस्तो गरेकी होली भनेर । सोचे उ हिजो जस्ती आज छैन् । उसको मन हिजो जस्तो छैन् । उ हरेक कुरामा सम्पन्न हुदै गएकि थि । यता कलम बेरोजगार, बेकामे, गबिरको छारा भएरै होला अब कलम उसको लायक छैन कि ?
यत्ति सोचे, हरेक प्रेम गर्ने जोडिहरुमा एउटाको प्रगती हुनु अर्कोका लागी निकै घातक पिडा रहेछ । प्रेम अगाडी दुबै समान हुदा माया गर्ने र एउटा सफलतामा पुग्दा अर्कोलाई घृणा गर्ने हुदा रहेछन् । हिजो कबिता त्यति माया गर्ने आज किन यस्तो कारण यहि हो उ आज सम्पन्न भएकी छे । उ आफु जस्तै केटा खोज्छ । कि कलम जस्तो गरिब होइन मैले पनि ठिकै हो । अब कबिताले कलमलाई भन्दा आफ्नै स्तरको खोज्छ ठिकै हो । दुनिया स्वार्थी छ । तर यता कलममा भने उ प्रतिको माया कत्ति पनि डगमगाएको भने छैन् ।
तर पनि उ पागल जस्तै भएको छ । मानसिक सन्तुलन गुमाए जस्तै छ भनेर साथीहरुले भन्दा निकै छाती पोलीन्छ र यस्ता माया प्रेमको जरा उखेल्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ । प्रेमिकाको सफलताले रुन पर्ने तिम्रो पीडा म कसरि मलम बनु यार माफ गर सकिन् । तिम्रो जीवनमा प्रेमिकाको सफलताले दिएको पिडा बिर्सन कठिननै छ होला । तर कलम तिमि पनि अब केहि सिक्दै जाउ यो पाठबाट । दुनिया स्वार्थी छ । र कलम तिमिमा पनि त स्वार्थ छ नी कबितालाई माया गर्नु ?
त्यहि सम्झौकि उसमा पनि त्यहि स्वार्थ रहेछ तिमिबाट टाढा हुने । अब बराबर भयो चित्त बुझाउ । हेर कबितासंग जिवन बिताउने, सपना देख्नु पनि स्वार्थ हो । बिना स्वार्थ तिमिले जत्ति भने पनि उसलाई माया गरेकै होइनौ । के यि तिम्रा स्वार्थ होइन्न् ? कबिता राम्री हुनु, ज्ञानी हुनु, बुझ्ने केटी, पढे लेखेकी । यहि भन्दैन थियौ ? त्यसैले माया गर्छु भनेर मलाई भनेका थिएनौ ?
बस अहिले बराबर भयो । स्वार्थमा एक अर्काको जित पराजित हुन्छनै अवस्य हो । समन्धमा जसले गोल बजार्छ त्यसैले जित हासिल गर्छ । भयो यो मेरो बसको कुरा होइन के कारण तिमिहरु छुट्यौ । मलाई थाह भएन । हो प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेमको बिछोड सहन नसकेर संसारमा धेरै जोडिहरुले आत्महत्या देखि अनौठा अनौठा कृयाकलाप गरेका सुन्नमा आउछन ।
भनिन्छ मानिसको जोडी माथिबाट नै भगवानले बनाएर पठाएका हुन्छन् । सायद, यो भनाई साचो हो किनकी माया प्रेममा यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । जहा गहिरो प्रेममा परेका जोडीहरुको पनि सम्बन्ध टुटेर अर्कैसंग बिहे भएको छ । समाजमा यस्ता थुर्पै जोडिहरु छन् । जो एक अर्कालाई अत्याधिक चाहेर पनि अन्तमा तिनीहरुको सम्बन्ध विभिन्न कारणले बिछेद भएका छन् । त्यसैले आफुलाई सम्हाल कलम । उहि तिम्रो साथी दिनेश